MyJonesSoda.com मा मेरो विम्पी छाला Martech Zone
MyJonesSoda.com मा मेरो विम्पी छाला
बिहीबार, जुन 8, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
म जाँच गर्दै थिए http://www.myjonesmusic.com पछिल्लो हप्ता र उनीहरूले भिम्पि फ्ल्यास आधारित फ्ल्याश-आधारित एमपी3प्लेयर प्रयोग गरिरहेको देखे। यो उही खेलाडी हो जुन मैले मेरो छोराको वेबसाइटमा कस्टम छाला निर्माण गरेको थिएँ, http://www.billkarr.com। त्यसैले मैले जोन्सको लाइनमा ठूला मान्छेहरू छोडिदिएँ र सोधें कि म तिनीहरूलाई छाला निर्माण गर्न सक्छु। मैले गरे, र 'भोला' गरे, अब उनीहरू आफ्नो साइटमा छाला प्रयोग गर्दैछन्।
तिनीहरू अन्य प्रशंसकहरू द्वारा अन्य डिजाइनहरू प्राप्त गर्न साइट खोल्न पनि विचार दिइरहेका छन्। मलाई लाग्छ कि यो एक शानदार विचार हो।
यो जहाँ धेरै कम्पनीहरूले वेबको साइट गुमाउँछन्। सोडाको स website्गीत वेबसाइटमा एमपी3प्लेयरको लागि छाला निर्माणले सोडा बेच्नेसँग के गर्नुपर्दछ? सबै! वेब तपाइँको श्रोताको साथ सम्पर्क गर्ने प्रासंगिक सन्देश मार्फत तपाइँसँग कुरा गर्ने माध्यम हो। धेरै कम्पनीहरूले सस्तो फ्रन्ट यार्ड ग्यारेज बिक्री चिन्हको रूपमा वेब प्रयोग गर्न जारी राख्यो।
जोन्सले पहिले म्युजिक साइट राखेर के गरे उनीहरूले आफ्नो ब्राण्ड मेरो छोरालाई मारे, जसले संगीत मन पराउछन् (र यसमा सूचीबद्ध छ) myjonesmusic.com)। र मेरो छोरा पछाडि, आफ्ना सबै साथीहरूलाई। र यस्तै, र यस्तै, र यस्तै। जोन्स सोडा द्वारा यो मास्टर्सल ब्रान्डि। हो। र सामग्री पूर्ण रूपमा हामी, उनीहरूको विश्वासी ग्राहकहरु द्वारा धकेलिएको छ।
तिनीहरूले यो निर्माण गरे। हामी आयौं। हामी किन्न जारी!
PS: चिनी रहित रूट बियर मेरो मनपर्ने छ।
जुन 9, 2008 मा 2: 45 PM
म कसरी मेरो छोराको जन्मदिन (अगष्ट २१) मा उनीहरूको तस्वीर सहितको बाह्र प्याला बोतलहरू अर्डर गर्दछु